China 0.12mm Corrugated Gi Galvanized Steel Sheet yeAfrcia fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Galvanized corrugated steel sheet imhando yerata rine marata rinoumbwa nekukunguruka uye kutonhora kukotama.Inokodzera kushongedzwa kwematenga, madziro uye mukati nekunze madziro ezvivakwa zveindasitiri uye zvehurumende, matura, zvivakwa zvakakosha uye refu-span simbi chimiro dzimba.
7.zinc kupfeka: 30-275gsm
Makora ane marara edenga remba ane hunhu hwehuremu huremu, simba rakawanda, ruvara rwakapfuma, kuvaka kuri nyore uye nekukurumidza, kuramba kwekudengenyeka kwenyika, kudzivirira moto, kudzivirira kwemvura, hupenyu hurefu uye kusagadzirisa-isina nezvimwewo, uye yakafarirwa zvakanyanya uye inoshandiswa.
(1) Yakanaka uye inoyevedza chimiro, akapfuma mavara, kushongedza kwakasimba uye inochinjika musanganiswa, inogona kuratidza akasiyana masitaera ekuvaka;
(2) Chiremba chakafa huremu, simba rakawanda, kuoma kweganda kwakanaka, uye kuita kwakanaka kwekudengenyeka kwemhepo kwemumiriri wekudzivirira mvura;
(4) Kuvaka kwakaringana nekumisikidza, kuderedza basa rekuisa uye kutakura uye kupfupisa nguva yekuvaka;
(5) Pepa resimbi rakadhindwa inzvimbo-inoshamwaridzika yekuvaka, inogona kushandiswazve.Kufarirwa uye kushandiswa kwesimbi yakashongedzwa kunoenderana nemutemo wekusimudzira hupfumi hwenyika.
(6) Monomer zvinhu zvinodhura uye hazvina kusimba zvakanyanya zvichienzaniswa nekongiri kana masonry enclosure zvinhu.
Corrugated galvanized steel denga pepa rakakodzera kune maindasitiri uye zvivakwa zvevagari, matura, akakosha zvivakwa, matenga, madziro uye mukati uye kunze kwemadziro kushongedza kwehombe-span simbi chimiro dzimba, nezvimwe.